‘मेरो वर्ष २०७६’ शुरु
समृद्ध दुप्चेश्वर निर्माणमा म मेरो र दुप्चेश्वरवासीको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार रहन्छु भन्ने नारासहित दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा मेरो वर्ष २०७६ शुरु भएको छ। मानिसको जीवनशैलीका कारण नसर्ने रोगको उच्च प्...
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डको १९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुक्रबार तीन दर्जन चलचित्रकर्मीहरु सम्मानित भएका छन् । बोर्डले २०७३, २०७४ र २०७५ गर...
एजेन्सी । सोसियल मिडियामा एक भयावह तस्बिर भाइरल भईरहेको छ । एक अजिङ्गरले फ्रेशवाटर गोहीको जिउँदै निलेको तस्बिरहरु सोसियल मिडिया भाइरल भइरहेको हो । अष्ट्रेलियाको उत्तरी क्षेत्र क्वीन्सल्याण्ड स्थित ...
काठमाडौं । नेपालले पहिलो टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमा घरेलु टोली मलेसियाविरुद्ध माथि सात विकेटको सहज जित हासिल गरेको छ। नेपालले मलेसियालाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो । शनिबार(आज) बिहान क्वालाल...
शहरी क्षेत्र डुबानमा यसकारण पर्छ !
काठमाडौं । बिहीवारदेखिको मनसुनी वर्षाले तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोको जोखिम ल्याएको छ। काठमाण्डू उपत्यकाका नदी किनारका केही वस्तीहरू भने डुबानमा परेका छन्। गएका केही वर्षदेखि थोरै पानी पर्दाखेरि नै सह...
भप्सी पुल बग्यो, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पूर्ण रुपमा अवरुद्ध
जनकपुर । चार दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका स्थित भप्सी पुल बगाएको छ । भप्सी खोलाको बाढीले पुलको बीच भाग नै बगाएको छ । पुल बगाएस...
वर्षाको वितण्डा : १९ जनाको ज्यान लियो, ७ अझै बेपत्ता
काठमाडौं । ढिलो गरि मुलुक भित्रिएको मनसुन पछी आम मानिसहरु खुशी देखिन्थे । असार महिना करिब बिदा हुनै लाग्दा निरन्तर भइरहेको वर्षाका कारण उपत्यका सहित मुलुकको विभिन्न ठाउँमा वर्षाको ताण्डव मच्चिएको छ ।...
त्रिशुलीमा ट्रक खस्दा सहचालक बेपत्ता, चालक घाइते
चितवन । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-५ स्थित नाग्दी खोलाबाट ट्रक त्रिशूली नदीमा खस्दा सहचालक बेपत्ता भएका छन् भने ट्रक चालक घाइते छन् । रुपन्देहीको भैरहवाबाट दाना बोकेर काठमाड...
अख्तियारको धमाधम ‘स्टिङ अप्रेसन’
कर्णाली प्रदेश डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भक्तबहादुर लामा चार लाख घुससहित पक्राउ परे । शुक्रबार प्राविधिक उपसचिव लामाले छुट पुर्जाँको म्याद थप गराइदिने भन्दै घुस मागेका थिए । अख्तियार दुरु...
मुख्यसचिव रेग्मीसँग प्रधानमन्त्री रुष्ट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । पछिल्लो समयमा सचिवहरुका कारण सरकार विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओली मुख्यसचिवसँग रुष्ट बनेका...
नक्कली चालक खडा गर्ने चार प्रहरीविरुद्ध मुद्धा
मानिसको ज्यान जाने गरी भएको सवारी दुर्घटनामा संलग्न चालकलाई उन्मुक्ति दिन नक्कली चालक खडा गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीका निरीक्षकसहित सात जनाविरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ...
बिहीबारदेखि सुरु भएको अविरल वर्षाका कारण पहाडमा पहिरो गएको छ भने काठमाडौं उपत्यका र तराई डुबानमा परेका छन् । शुक्रबार रातिसम्म १८ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । सात बेपत्ता छन् । ...
झरीसँगै नेविसंघको जात्रा
काठमाडौं । भनिन्छ- नियोजित विरोधले मौसम, स्थान र मुद्दाको खोजी गर्दैन । केवल विरोधलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राख्छ । केही समययता सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको...
काठमाडौं । ढिलो गरि मुलुक भित्रिएको मनसुन पछी आम मानिसहरु खुशी देखिन्थे । असार महिना करिब बिदा हुनै लाग्दा निरन्तर भइरहेको वर्षाका कारण मुलुकको विभिन्न ठाउँमा वर्षाको ताण्डव मच्चिएको छ । ढिलो गरि आएको...
वर्षाको असर: यति एयरलाइन्सको जहाज धावनमार्गमा चिप्लियो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय उडान लिएर काठमाडौं आइरहेका विमानहरु नेपाली आकाशमै रोकिएका छन् । शुक्रबार बिहान यती एयरलाइन्सको विमान अवतरणको क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्...
एजेन्सी । चीनले सन् २०२५ सम्म अन्तरिक्षमा सय वटा उपग्रह(स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्ने योजना बनाएको छ । यसबाहेक हालसम्म चीनको सयभन्दा बढी स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा मौजुद छन् । चिनियाँ राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प...
एजेन्सी । कसरतले शारीरिक स्वस्थता मात्रै होइन मानसिक स्वस्थता पनि कायम राख्छ । शारीरिक कसरत मध्येकै एक हो- पुस-अप । रुसको एक बच्चा पुस-अप गरेकै कारण सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको शिखर चुमीरहेका छन् । त...
रौतहटमा बस्ती डुब्यो, सडक अवरुद्ध भएसँगै दुवैतर्फका सवारी रोकिए !
रौतहट । बिहिबार बिहानदेखि आएको अविरल वर्षाका कारण रौतहटको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बाढीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध बन्न पुगेको छ भने लाल बकैया नदीले बन्जरहाको बाँध कटान गर्दा आधा दर्जन बस्ती डु...
देशभर लगातार वर्षा हुने सम्भावना
काठमाडौं । मनसुन अति सक्रिय रहेका कारण अझै दुई देखि ३ दिनसम्म लगातार वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । मनसुन न्युन चापीय रेखामा रहेका कारण यसको असर तराईका साथै मध्य त...
आज घरघरमा तुलसी सारेर ‘हरिशयनी एकादशी’ मनाइँदै
काठमाडौं । आज हरिशयनी एकादशी । नेपालीले घरघरमा तुलसीको बिरुवा रोप्ने चलन छ । जेठ शुक्ल एकादशीका दिन घरघरमा उमारिएको तुलसीको बिरुवा आज रोपिएको हो । प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घरघरमा तुलसीको...